भाग्य न्यौपानेले अचानक देश छोडे , आखिर कारण के थियो ? ….( हेर्नुहोस भिडियो ) - Nepal Insider
Home/भिडियो/भाग्य न्यौपानेले अचानक देश छोडे , आखिर कारण के थियो ? ….( हेर्नुहोस भिडियो )
भाग्य न्यौपाने एक सामाजिक अभियान्ता मात्र नभइकन एक न्युज रिपोर्टर पनि हुन। उनी तात्तातो खबरमा जोडियर काम गरेको पनि आज २ बर्ष पूरा भयको छ । लाखौ नेपाली जनताहरुको मन मुटुमा बस्न सफल उनी आज केही कारणले नेपाल बाहिर जाँदै छन ।
उनी बिभिन्न ठाउमा गयर त्यहाको बिकास सङ्गै त्यहाको बाताबरण नियालेर आफ्नो देशमा लागू गर्ने हिसाबले गयका छन। गरिब असाय र निमुखाहरुका लागि भगवान बनेका भाग्य न्यौपाने लाई केही दिन सम्म ओझेल परेको देख्न सकिन्थ्यो ।
उनी आफू नहिच्किचाइकन अगाडि बड्ने गर्दथे । अहिले का चर्चित बाल गायक अशोक दर्जी लाई पनि उनिले उद्दार गरेका हुन भने यहाँ सम्म ल्याइपुराउन उनको ठुलो हात रहेको छ भने दुबै मृगौला फेल भयका बालक समीर तामाङ्ग लाई पनि नया जीवन दिलाउने यिनै भाग्य हुन अनि बर्षौ देखि दुबई को जेलमा मृत्युको समय पर्खिराखेका खडक बहादुर जोगिलाइ सकुसल नेपाल फर्काउन पहल गर्ने पनि यिनै भाग्य हुन । यस्ता सामाजिक काम भाग्ले धेरै गरेका छन ।
सुरु देखि अन्तिम सम्म तात्तातो खबरमा सम्प्रेषण भयका भिडियो हरु हेरिदिन आग्रह गर्दै बिदेश यात्रा गरे भाग्यले । आखिर के कारण उनी नेपाल छोडेर अर्को देश गय त ? जान्न को लागि कृपया लिन्क खोलेर हेरिदिनुहोला ।
हिरासतभित्र बन्दीहरुको भिडमा रबि लामिछाने कसरी यसरी बसेका छन् ! यस्तो भिडियो बाहिरियो (भिडियो हेर्नुस)
यति ठूलो चोटमा टीका सानू , सके सहयोग गरौ नसके शेयर गरौ ….(हेर्नुहोस दर्दनाक भिडियो)
काठमाडौंको एउटा घरमा श्रीमान श्रीमतीको झगडा शिशिर भण्डारी छुट्टाउन जाँदा यस्तो भयो (भिडियो हेर्नुस)